ဘာစီလိုနာ အတွက် မက်ဆီ ရဲ့ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကား ( သို့ ) သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အပြည့်အစုံ - SPORTS MYANMAR
ဘာစီလိုနာ အတွက် မက်ဆီ ရဲ့ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကား ( သို့ ) သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အပြည့်အစုံ
ဘာစီလိုနာ ကနေ ထွက်ခွာရတော့မယ့် လီယွန်နယ် မက်ဆီ ဟာ ဒီကနေ့မှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို နူးကမ့် ကွင်းမှာ ပြုလုပ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာစီလိုနာ မှာ ဆက်ကစားချင် ပေမယ့် မဖြစ်နိုင်တော့ တာကြောင့် လမ်းမခွဲချင်ဘဲ လမ်းခွဲ ခဲ့ရတဲ့ မက်ဆီ ဟာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ညှိုးငယ်တဲ့ မျက်ဝန်း အစုံနဲ့ တက်ရောက် လာခဲ့ပြီး ဘာမှ စမပြောရခင်မှာဘဲ ဝမ်းနည်းစိတ်ကြောင့် ငိုကြွေး ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲကို မီဒီယာတွေ အပြင် မက်ဆီ ရဲ့ သား ၃ ယောက် နဲ့ ဇနီးသည် ၊ ဘာစီလိုနာ ဥက္ကဌ လာပေါ်တာ ၊ အသင်းဖော်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဂရစ်ဇ်မန်း ၊ ပီကေး ၊ အမ်တီတီ နဲ့ ဖရန်ကီ ဒီယွန်တို့ တက်ရောက် ခဲ့ကြပါတယ် ။
မက်ဆီ ဟာ နှုတ်ဆက် စကားပြောဆို နေစဉ်အတွင်း ဝမ်းနည်း စိတ်ကို မဖုံးမိ ထားနိုင်ဘဲ မကြာခဏ မျက်ရည် သုတ်ခဲ့ရသလို စကားပြောဆို အပြီး အားလုံးက မတ်တပ်ရပ် လက်ခုပ်တီးကာ ဂုဏ်ပြု ချိန်မှာလည်း အာဂျင်တီးနားသားဟာ ငိုကြွေး နေခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ဆုံး မှာတော့ ၁၇ နှစ် နဲ့ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ကြာတဲ့ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ် ဟာ နိဂုန်းချုပ် ခဲ့ရပါပြီ ။
“နှစ်တွေ အများကြီး ကြာခဲ့ပြီးတဲ့ နောက် ဒါဟာ ကျွန်တော့ အတွက် ၊ ကျွန်တော့ ဘ၀ မှာ အရမ်း အရမ်းကို ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီကိစ္စ အတွက် ကျွန်တော် အဆင်သင့် မဖြစ်သေး ပါဘူး ။ ဒီနှစ် မှာ ကျွန်တော် မိသားစု က ဒီ ဘာစီလိုနာ မှာပဲ ဆက်နေဖြစ်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတာပါ ။ ဒီမြို့မှာ နေခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ ၊ ဒီမှာ ကစားခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေက အရမ်းကို အံ့သြစရာတွေ ပါပဲ”
“ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ မှာတော့ ဒါတွေကို ကျွန်တော် နှုတ်ဆက် စကားပြောဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ ပါပြီ ။ ဒီကို ကျွန်တော့ အသက် ၁၃ နှစ်ကတည်းက ရောက်လာခဲ့တာပါ ၊ အခု ၂၁ နှစ်တောင် ကြာခဲ့ပါပြီ ။ ကျွန်တော့ ဇနီး ရယ် ကတ်တလန်သွေး ပါတဲ့ အာဂျင်တီးနားသားလေး ၃ ယောက်နဲ့ အတူ ထွက်သွားတော့မှာပါ”
“ကျွန်တော် ပြန်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး ။ ဒီက ကျွန်တော့ရဲ့ လက်ရှိ အသင်းဖော်တွေ ၊ အသင်းဖော် ဟောင်းတွေ ၊ ကလပ်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ အတူ ရှိခဲ့တဲ့သူတွေ ၊ ရှိနေတဲ့သူတွေ ၊ ခန လောက်ပဲ ခင်မင် ခဲ့ရသူတွေ ၊ ပရိသတ်တွေ အားလုံးဟာ ကျွန်တော့ အတွက် တကယ့်ကို ခမ်းနားတဲ့ အမှတ်တရ တွေပါပဲ”
“အရမ်း ကြည်နူး ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ အရာတွေ ရှိခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒိလိုပဲ ဆိုးရွားတဲ့ ကာလတွေ ကိုလည်း ဖြတ်ခဲ့ရတာပါ ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက ကျွန်တော့ကို ပိုကောင်းလာအောင် ကူညီခဲ့တယ် ၊ တိုးတက် လာအောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ် ၊ ဒီကနေ့ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်လာအောင် အားလုံးက ဝိုင်းကူ ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီကလပ် နဲ့ ဒီ ဂျာစီ အတွက် ပထမဆုံးစတင်တဲ့ နေ့ကနေ နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်တဲ့ နေ့အထိ ကျွန်တော် အစွမ်းကုန် ပေးဆပ် ခဲ့တာပါ”
“အခု ကျွန်တော် ထွက်သွား ပါတော့မယ် ၊ ဒါက အမှန်တရား ပါပဲ ။ ကျွန်တော့ အပေါ် အရမ်း ဂရုစိုက် ကြင်နာမှုတွေ အတွက် အရမ်း ဝမ်းသာမိပါတယ် ။ ဒီလို နှုတ်ဆက်ရမယ်လို့ ကျွန်တော်လုံး၀ မျှော်လင့် မထားခဲ့ တာပါ”
“ပရိသတ်တွေ ကို ၁ နှစ် ခွဲလောက် မမြင်ရဘဲ ဒီကလပ်ကြီး ကနေ ထွက်သွားရတာ ကျွန်တော့ကို အရမ်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်စေပါတယ် ။ နူးကမ့် ကွင်းအပြည့် ရှိနေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အလယ်မှာ နှုတ်ဆက် စကားပြောပြီး ထွက်သွားချင်တာက ကျွန်တော့ရဲ့ စိတ်ကူးအမှန်ပါပဲ ၊ အခု ဒါက မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး” လို့ မက်ဆီ က သူ့ရဲ့ နှုတ်ဆက်စကားကို စတင်ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒိ နောက်မှာတော့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို မက်ဆီက စတင်ဖြေကြား ပေးသွားခဲ့ ပါတယ် ။
မေး – ဘာစီလိုနာက အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့်က ဘာဖြစ်မလဲ ?
မက်ဆီ – အခိုက်အတန့် တစ်ခုခု တည်းကို ရွေးလိုက်ဖို့က အရမ်းခက်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဘာစီလိုနာ နဲ့ စပြီး ပွဲထွက်တဲ့ အချိန် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၊ ဒါက ကျွန်တော့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ တကယ် ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အခိုက်အတန့် ပါပဲ ။ အဲ့ဒိ နောက်ပိုင်း ဖြစ်လာတာတွေကတော့ တကယ့် အံ့ဖွယ်တွေပါ ။ ရွေးထုတ်ဖို့ ခက်ပေမယ့် အားလုံးကို အမှတ်ရနေမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ ။
မေး – စာချုပ်သစ် ပြန်ချုပ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တာလား ?
မက်ဆီ – လာပေါ်တာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သဘောတူထားခဲ့ ပြီးပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး မိနစ်မှာ ဒါက ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး ။ ကျွန်တော် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုနေတာတွေကို ကြားရပါတယ် ။ ကျွန်တော်က စိတ်ခံစားချက် အတိုင်း ပြောတဲ့သူပါ ၊ မနှစ်က ဒီမှာ မနေချင်ဘူးလို့ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒီနှစ် မှာတော့ ဒီမှာ ကျွန်တော် ဆက်နေချင်ခဲ့တာပါ ။ ဖြစ်လာအောင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကလပ်အသင်းဘက်က မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ၊ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ လာလီဂါ ကြောင့်ပါ ။ ဒါကို လက်ခံပြီး ရှေ့ဆက်ရတော့ မှာပါပဲ ။
မေး – ဘာစီလိုနာ က မင်းကို ဆက်ထိန်းထားဖို့ အစွမ်းကုန် လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ထင်သလား ?
မက်ဆီ – မသိပါဘူး ၊ သေချာပေါက် ပြောနိုင်တာကတော့ ကျွန်တော့ ဘက်က လုပ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် လုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာပါပဲ ။ ကျွန်တော့ရဲ့ ဘက်ကနေ ဒီမှာ ဆက်နေရဖို့ အတွက် အရာအားလုံး လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
မေး – ဒါက မင်း အတွက် အခက်ခဲဆုံး ဖြစ်နေမလား ?
မက်ဆီ – အခု ခေါင်းထဲမှာ အများကြီး ရောထွေးနေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိတော့ ကျွန်တော် မပြိုလဲ သေးပါဘူး ။ ဒီကလပ်ရဲ့ ပထမအသင်းမှာ ၁၆ နှစ်ကျော် ကစားလာခဲ့ပြီး အခုလို ထွက်ခွာရတာကတော့ ကျွန်တော့ အတွက်ရော ကျွန်တော့ မိသားစု အတွက်ပါ ခက်ခဲ စေခဲ့ပါတယ် ။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာဆက်ဖြစ်လာမယ် ဆိုတာအတွက် ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေဖို့ ကြိုးစားရမှာပါ ။
မေး – PSG က နောက်ပြောင်းမယ့် အသင်းလား ?
မက်ဆီ – ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိတော့ ဘာနဲ့မှ သဘောတူထားတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး ။ ဒီကိစ္စ သတင်းထွက်ပြီးတာနဲ့ ကလပ် အသင်းအများကြီးက ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ရောက်လာခဲ့ ပါတယ် ။ ခုထိတော့ ဘာကိုမှ အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဆက်လုပ်နေပါတယ် ။
မေး – ဒီကလပ် မှာ မင်း ဘယ်လို အမွေအနှစ်မျိုး ချန်ရစ်ထားခဲ့တယ်လို့ ထင်သလဲ ?
မက်ဆီ – ကျွန်တော် က ကလပ် အသင်း နဲ့ အတူ မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ ၊ ဘာစီလိုနာ အောင်မြင်သလို ကျွန်တော်လည်း အောင်မြင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီအတိုင်းပဲ မြင်စေချင်ပါတယ် ။ လူတွေ ကျွန်တော့ကို မြင်တဲ့ အမြင်ကတော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက် နဲ့ ရွေးချယ်မှု အပေါ်မှာပဲ မူတည်မှာပါ ။ ဆုဖလားတွေ ရော ရှုံးနိမ့်မှုတွေပါ ကျွန်တော်တို့ကို ပိုပြီး တိုးတက် လာစေခဲ့ပါတယ် ။ မပျော်ရတဲ့ အချိန်တွေထက် ပျော်ရတဲ့ အချိန်တွေက ပိုများခဲ့တာတော့ အသေအချာပါပဲ ။
မေး – ဒါက မင်း ဘ၀ မှာ အခက်ခဲဆုံး အခိုက်အတန့်လား ?
မက်ဆီ – သံသယ ဖြစ်စရာမရှိပါဘူး ။ အခက်ခဲဆုံးပါပဲ ။ နာကျင်စရာ ကောင်းတဲ့ ရှုံးပွဲတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးမှာ ဒါကို တုန့်ပြန်ဖို့ အခွင့်အရေး အမြဲတမ်း ရှိပါတယ် ။ ဒီကိစ္စ မှာတော့ ဒါမျိုး မရှိပါဘူး ။ အခု ကျွန်တော် အရမ်း ဝမ်းနည်း နေပါတယ် ၊ ကျွန်တော် ချစ်ရတဲ့ အသင်းကနေ ထွက်ရတော့မှာပါ ။ ဒါကို မျှော်လင့် မထားပါဘူး ၊ မနှစ်က တကယ်ထွက်ချင်ခဲ့တာပါ ၊ ဒီနှစ်တော့ ဒီမှာပဲ ဆက်နေချင်ခဲ့တာပါ ။
မေး – မင်း မရှိတော့တဲ့ ဘာစီလိုနာ ကို ဘယ်လိုများ ပုံဖော်ကြည့်မိလဲ ?
မက်ဆီ – အသင်းက တောင့်တင်း ပါတယ် ။ တခြား ကစားသမားတွေလည်း ထပ်ရောက်လာ ဦးမှာပါ ။ ဘောလုံး သမား ဆိုတာကတော့ ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် ပါပဲ ။ လာပေါ်တာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ ၊ ဘာစီလိုနာ ဆိုတဲ့ ကလပ်ဟာ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ထက် ပိုပြီး အရေးကြီးပါတယ် ။
ဒါကို လူတွေ အသားကျဖို့ လိုပါတယ် ။ စစချင်းတော့ ဒါက ထူးဆန်းပြီး နားလည်ဖို့ ခက်နေမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အသားကျနေဖို့ လိုပါတယ် ။ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးမှာ ဥက္ကဌသစ် ( လာပေါ်တာ ) နဲ့ ကျွန်တော် နေ့လည်စာ စားခဲ့ပြီး ဆက်နေဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ် ။ ဘာပြဿနာ မှ မရှိခဲ့ပါဘူး ။ စာချုပ်က ဘယ်တုန်းကမှ ပြဿနာ မဖြစ်ခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် အခု မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ။
မေး – ပရိသတ်တွေကို တွေ့ဖို့ ပြန်လာဦးမှာလား ?
မက်ဆီ – ဒါပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် အရင်တုန်းကနဲ့တော့ တူမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ ကျွန်တော် လိုချင်နေတာက အခုအခိုက် အတန့် မှာပါ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီကလပ်အတွက်ဆိုရင် ဘာမဆိုလုပ်ပေးဖို့ အဆင်သင့် ပါပဲ ။
မေး – လာလီဂါ ဥက္ကဌ ( ဂျာဗီယာ တီဘတ်စ် ) အတွက် ဘာများပြောချင်ပါသလဲ ? သူက မင်းဆက်နေရဖို့ အကုန်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်
မက်ဆီ – ကျွန်တော် သိတာကတော့ လာလီဂါ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မဆက် နိုင်ခဲ့တာပါ ။ ကလပ် ရဲ့ အကြွေးတွေက များပါတယ် ၊ နောက်ထပ် အကြွေးထပ် အတင် မခံချင်တော့ ပါဘူး ။ သူ့အတွက်တော့ ကျွန်တော် ဘာမှ ပြောစရာ မရှိပါဘူး ။ သူနဲ့ ကျွန်တော့ကြားမှာ ဘာပြဿနာ မှလည်း မရှိပါဘူး ။
မေး – ဇာဗီ နဲ့ အင်နီယေစတာ တို့က ဘာစီလိုနာ ကနေ အဝေးကြီးကို ထွက်ပြီး ကစားခဲ့ကြတယ်နော် ၊ မင်း ( ဥရောပ ကလပ်တသင်းသင်းကို ရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ) ဘာစီလိုနာ နဲ့ ပြန်ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ် ၊ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ?
မက်ဆီ – ကျွန်တော် ဘယ်လိုလူမျိုး ၊ ဘယ်လို စိတ်ဓါတ် ရှိတယ် ဆိုတာ လူတွေ ကောင်းကောင်း သိမှာပါ ။ ကျွန်တော် က အနိုင်ရတာကို နှစ်သက်ပါတယ် ။ နောက်ဆုံး ရာသီတွေမှာ ဆုဖလားတွေ အတွက် ကျွန်တော် တိုက်ပွဲဝင်ချင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါနီ အဲလ်ဗက် ကို ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ် ( အိုလံပစ် ရွှေတံဆိပ် ရခဲ့သည် ) ၊ သူ့ထက် ကျွန်တော် ဖလားတွေ ပိုများချင်ပါတယ် ( အဲလ်ဗက် ၄၃ ၊ မက်ဆီ ၃၈ ) ။
မေး – အိုင်ဘီဇာ မှာ တုန်းက PSG ကစားသမားတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့တယ်နော်
မက်ဆီ – ဒါက တကယ့်ကို တိုက်ဆိုင် ခဲ့တာပါ ။ ပါရီဒက်စ် နဲ့ ဒီမာရီယာ တို့ကို တွေ့ဖို့ ကျွန်တော် သွားခဲ့တာပါ ။ နေမာ က ကျွန်တော့ကို လှမ်းခေါ်ပါတယ် ၊ ပါရီဒက်စ် ဒီမာရီယာ တို့နဲ့ အတူ ရှိနေတာလို့ ပြန်ဖြေတော့ အားလုံး လာခဲ့ဖို့ သူက ထပ်ပြောပါတယ် ။ ကျွ်တော်တို့ ဓါတ်ပုံ အတူ ရိုက်ခဲ့ကြတယ် ၊ ပြီးတော့ PSG ကို လာခဲ့ဖို့ သူ ပြောပါတယ် ၊ ဒါက ဟာသအနေနဲ့ပြောခဲ့ ကြတာပါ ။ ဒီလောက်ပါပဲ ။
မေး – ဒီမှာ ဆက်နေဖို့ မယုံနိုင်လောက်တဲ့ အရာတစ်ခုခု လုပ်ဖို့ စဉ်းစားထားသလား ?
မက်ဆီ – ဆက်နေဖို့ အစွမ်းကုန်လုပ်ခဲ့ပြီး ပါပြီ ။ ထပ်ပြီး ထည့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ။
မေး – မင်း လစာတွေ လျော့ယူဖို့ ဖိအားပေးခံရတယ်ဆို ၊ အဲ့ဒါက ဒီပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးလား ?
မက်ဆီ – လစာ ၃၀% ပဲ ယူဖို့ ဆိုတဲ့ သတင်းက အမှားကြီးပါ ။ ကျွန်တော်တို့ ၅၀% နဲ့ သဘောတူခဲ့ ကြတာပါ ။ ထပ်ပြီး လျော့ယူဖို့ ဘယ်သူမှ မပြောခဲ့ပါဘူး ။
မေး – တစ်ယောက်ယောက် မင်းကို လှည့်စား ခဲ့တယ်လို့ ရော မထင်မိဘူးလား ?
မက်ဆီ – ကျွန်တော်တို့ အားလုံး အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပြီး အခု ဒါက ဖြစ်မလာ နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ကျွန်တော် ပရိသတ်တွေကို အမြဲပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောခဲ့ပါတယ် ၊ လိမ်ညာတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး ။ အသံတွေ သိပ်ထွက် မလာဘူးဆိုရင် လူတွေက အမျိုးမျိုး ထင်တတ်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီ ထင်မြင်ချက်တွေက အလိမ်အညာတွေ ပါ ။